top 10 Talooyin Easy Waayo Tareen Riding Smart Meel | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > top 10 Talooyin Easy Waayo Tareen Riding Smart Meel
Ku safrid tareen noqon kartaa mid ka mid ah siyaabaha ugu nasasho iyo raaxo leh si aad u hesho agagaarka. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo sameeyo sida ugu fiican ee ka mid ah safarkaaga oo noqon smart. In si fiican u habaysan oo ogaa waxa waxa ay waddada u xaareysaa samaynta aad tareen safar muujiyo aad fasaxa ama u quudhin. Eegno Top kuwan 10 Talooyin u fududahay in Tareenku Riding Smart. U diyaar u ah safarka soo socda.
top 10 Talooyin u fududahay in Tareenku Riding Smart – TALO ONE: Iibso Your Ticket In Advance
top 1 of Top 10 Talooyin u fududahay in Tareenku Riding Smart, Hubi in ay qorsheeyaan safarkaaga iyo iibsato tigidhka tareenka aad ka hor si loo hubiyo in aad hesho tareenada aad rabto. U hubso in aad weydiiso oo ku saabsan wax gaar ah ama qiimo dhimis laga yaabo in aad heli karto. Yaa ma jecla badbaadiyo lacag caddaan ah qaar ka mid ah! awoodaan in ay aad u noqon doonaa qayb ka mid ah lacagta badbaadiyo in la geliyo qaybaha kale ee safarka.
Qof dumar ah oo ka shaqaysa Saldhig Tareenku
TALO LABAAD: Stow Your shandadaha
Easy Talooyin wanaagsan ee tareenka waa in aad had iyo jeer ma u baahan tahay si loo hubiyo bacaha iyo haddii ay yihiin of size macquul ah in aad sidoo kale dooran kartaa in aad ku kaydi hayayaashii kor kursiga ama waslad galay meesha bannaan ee u dhexeeya saddex xagal kuraasta dib-iyo-gadaal. Sidaas aad leedahay bacaha aad kuu dhow waqtiyada oo dhan.
TALO SADDEXAAD: Noqo Smart Iyadoo Dambiisha Your
Waxaan ma leh in tareen kasta waxay leedahay tuug diyaar u ah fursad ugu horeysay ee ay u hesho, laakiin halkii ay ahaan on the dhinaca ammaan. Feejignaadaan marka ay timaado bacaha aad. U kaydi si aragti halkii dhamaadka baabuurta tareen. Haddii aad leedahay boorsada ah waxa kale oo aad clip kartaa Xarkaha si aad u hayayaashii boorsooyinka in ay noqon ammaan oo dheeraad ah.
TALO AFRAAD: Raadi Your Kursiga
Haddii aad isticmaali Talooyin hore Easy our safarka tareenka oo ay leeyihiin kursi hayaa aad oo dhan soocaa. Waxaad si toos ah u tegi kartaa si aad meel. Haddii aadan, soo dhawow in aad sheegato wax kursiga furnaansho. Haddii ay jiraan qaar badan oo ka mid ah, kuwaas oo la heli karo, hubi tags Boos posted kor kuraasta ama albaabada qol ah. tags ayaa muujinaya kala socodka ka mid ah in kursiga waxaa jaale. Waxay sidoo kale muujinaya haddii aad qaadato ka hor inta milkiilaha xitaa helo on si xor ah u qaadan kursiga in aad tahay.
TALO SHAN: Isticmaal Time tareenka si caqli ah
Qaado fursad ay ku isticmaalaan waqtiga ku baxay safarka tareenka si aad naftaada abaabulay. Waxaad qorsheeyo kartaa meesha aad u socoto ee soo socota. Isticmaal waqtigan in uu akhriyo aad tilmaame, hubi tilmaamaha si aad u socoto ee soo socota. Dhex mara sawiradaada, habayso boorsada, double-hubi la xidhiidha ama dhameeyo hawlaha kale ee aad u baahan tahay in halka aad haysato waqti ku. Haddii safarka dheer this sidoo kale waa fursad fiican si ay u qaataan qaar ka mid ah indhaha ku.
Lyon Airport ilaa Nice oo Tareenka laga raaco
TALO LIX: Isticmaal musqulo The tareenka
Si loo badbaadiyo waqti iyo lacag labadaba isku dayaan oo ay isticmaalaan this Talooyin Easy waayo tareenka oo ay isticmaalaan musqulaha oo ku saabsan tareenka sida soo horjeeda oo isticmaalaya kuwa saldhiga. musqulaha Tareenka ayaa waxaa sida caadiga ah ku yaal dhamaadka baabuur iyo inta badan nadiifiye ka badan musqulaha ee saldhigyada, iyo sidoo kale isagoo xor ah.
TALO TODOBAAD: Talk to Locals and Other Travelers
tip 7 out of our Top 10 Talooyin u fududahay in Tareenku Riding Smart, Waa maxay hab fiican si ay u bartaan magaalada ama dalka ku saabsan ka badan adigoo la hadlaya qaar ka mid ah ay deegaanka, ama safarka ah oo kale oo laga yaabaa in meesha aad u socotid? Waxay awoodaan inay kuu sheegaan ka tago iyo mooraal ahaan doonaa caga waana idiin Naseexayn waxa ay samaynayaan iyo waxa aan la samayn. Isku day jabiyay baraf adoo waydiinaya su'aal, bixiya wax udgoon ama muujinaya ka samee.
TALO siddeed: Boorso fudud a
Safrida waa shaqo waa gaajaysnayd, oo waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku xirato wax si fudud on marka aad on tareenka. Waxaad oolin kartaa cuntada aad jeceshahay ee supermarket maxalli ah ama qabow ama booqo maqaasiinka khamri ka hor inta aadan bood on tareenka; ugu tareenada waxay leeyihiin ugu yaraan mid ka mid ah. The cuntada tareenada bixiyeen badanaa waa jilicsan iyo qaalisan haddii aad bixinaysid kursiga fasalka-koowaad.
TALO SAGAALKA: Ogow meesha aad ka heli Off
Ogow oo saldhigga waa mid ka mid ah Talooyin Easy muhiim u ah safarka tareenka. Markii aad timaado magaalo aad joojiso karaa dhowr saldhig hareeraheeda ah oo leh calaamado muujinaya magaca aad u socoto iyo magaca xaafadda, laakiin ha iska bood ilaa aad ka gaarto saldhiga dhexe. Waxaad mar walba ka codsan kartaa rakaab la shaqayn jiray ama loo hubiyo tilmaame caawimaad dheeraad ah.
TALO TOBAN: Had iyo jeer Xusuusnow Local Tareen Adaabta
Qaado note rakaabka sida kale ee gaariga tareenka aad ku simaha. Haddii way xasilloon yihiin, hubi inaad raacdo joog. Iska calaamado muujinaya laga yaabaa in aad ku fadhiya baabuur loogu talagalay aamusanyahay oo dadku yimaadaan si ay seexdaan ama shaqo. arrinta No meesha aad fadhiya, isku day in aadan noqon qofka loudest u dhow. In la hubiyo in aan ku nastaan ​​cagaha kursiga guud ahaan aad ka aad, haddii aadan haysan mooyee kabahaaga off.
Haddii aad xusuusan kuwaas Top 10 Talooyin u fududahay in Tareenku Riding Smart waxaan idiin ballanqaadayaa safar super iyo waayo-aragnimo weyn oo guud. xitaa laga yaabaa in qaar ka mid ah dadka deegaanka aad la kulmi cusub oo aad sameysatid saaxiibo cusub qaarkood! Wax kasta oo suurto gal ah marka ay timaado safarka tababarka. Marka aad addoonsada kuwan, markaas ka fiirso Bernina Express iyo in ka badan!
– Haddii aad jeclaan our post on Top 10 Talooyin u fududahay in Tareenku Riding Smart, si xor ah u la wadaagno, waxaan helnay badhamada lagu wadaago wax yar ka hooseysa post blog this.
Ready in ay qaataan door tareen? Buugga kursiga oo aadan bixin wixii kharash jaale at – www.saveatrain.com
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-10-easy-tips-for-train-riding-smart%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
talooyin caarada tababarka tareen safarka